AU oo ka shiraysa xaaladda Burkina Faso - BBC News Somali
AU oo ka shiraysa xaaladda Burkina Faso
Gollaha ammaanka iyo nabada ee Midowga Afrika ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ka shiro xaaladda dalka Burkina Faso, gaar ahaan miletariga la wareegay awooda dalkaasi.
Midowga Afrika ayaa horay ugu baaqay in xilliga kala guurka ee dalkaasi uu hoggaamiyo maamul madani ah.
Madaxweynihii hore ee dalkaasi Blaise Compaore ayaa lagu qasbay in uu xilka isaga dago isla markaasna uu isaga cararo dalkaasi, kaddib markii ay dhaceen dibed baxyo lagu diidanaa in uu kordhisto mudada uu xilka haynayo.
Waxa laga yaabaa in Gollaha ammaanka iyo nabadda ee Midowga Afrika uu go'aansado in Burkina Faso ka saaro xubunimada ay ku leedahay Midowga Afrika, iyadoo sabab uga dhigayo miletariga dalkaas ee awooda la wareegay.
Midowga Afrika ayaa sheegaya in Burkina Faso uu u diray koox khubara ah oo la socota xaaladda dalkaasi, kaddib maalmo ay dibed baxyo ay dhacayeen, dibed baxyadaas oo ku qaaday in madaxweynihii hore xilka baneeyo.
Guddoomiyaha Midowga Afrika Nkosazana Dlamini-Zuma, ayaa ugu baaqday miletariga in uu ka digtoonaado in uu jeediyo hadalo ama uu ku dhaqaaqo ficilo keni kara xasilooni daro ama uga sii dari kara xaaladda haatan dalka uu ku suganyahay.
Maraykanka ayaa sidoo kale ku baaqay in si dhaqsa ah awooda loogu wareejiyo maamul madani ah iyo in loo talaabsado sidii loo sameyn lahaa doorasho xor iyo cadaalad ah.
Baaqyadan ayaa waxa ay jawaab u yihiin militeriga Burkina Faso oo sheegay in uu Madaxweynaha ku meel-gaarka ah u magacaabay Col Isaac Zida.